ड्रेस कोड प्यान्ट-ह्वाइट | Shekou Woman
'Emm कुरा गर्नको लागि केहि चीज दिनुहोस् ... यी उच्च-तानको प्यान्टमा एक लोभ स्ट्राक्ट गरिएको ढाँचा र परम होल्फिको फिटको लागि एक लोभ्रैट गरिएको ढाँचा छ। हाम्रो ड्रेस कोड प्यान्टमा कथन गर्नुहोस्, विशेष रूपमा NZ मा डिजाइन गरिएको।
Zip, बटन क्लप बन्द
इन -0.0.0 सेमी
कम्मर: .4 34.0 सेमी
100% हल्का पॉलिएस्टर (यी अन्तिम सान्त्वनाको लागि हल्का सामग्रीमा डिजाइन गरिएको हो)
सिफारिश गरिएको मेशिन चिसो धुने
२X-सानो एक्स-सानो सानो मध्यम (प्रतीक: 6--8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) (Out of stock) ठूलो (प्रतीक: 6-8 हप्ताहरूमा जहाजहरू) एक्स-ठूलो २X-ठूलो
यसलाई लोभ्याउनु भयो! केवल कुरा के हो भने त्यो ढीलो थ्रेडहरूको लास छ.
म पैन्टको अपेक्षा थियो कि विभिन्न सामग्री (तिनीहरू डेनिम जस्तो देखिन्थे), तथापि यो एकदम पातलो थियो. प्रिन्ट त अचम्मै छ तर उनीहरुले पनि सानो सानो यति नै धाए पनि मेरो लागि पूर्ण
समयमै राम्रो आइपुग्यो.
थुक्क गुण!!! ग्रेट प्रिन्ट र फिट हुँदा ... कम्मर एकदम ठूलो थियो र मलाई पिन्स र डबल एकतर्फी टेप सुरक्षित गर्नुपर्यो. अतिनै माया!!!
उनीहरू सानो ठूलो र यो सामग्री मैले अपेक्षा गरेको सामग्री होइन तर यो वास्तवमै राम्रो छ.
म यी प्यान्टलाई एकदम माया गर्थे जब मैले तिनीहरुलाई देखे र मैले तिनीहरुलाई परेको थाहा पाएँ. मैले किन्ने कोसिस गरेको थिएँ किनभने मैले उनीहरूलाई एउटा इन्स्टाग्राम विज्ञापनमा देखेँ तर वास्तवमा म साँच्चिकै उनीहरूजस्तै भएँ. एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका लागि जहाजको समय सामान्य थियो त्यसैले म त्यसमा प्रसन्न भएँ. समग्र गुणस्तर ठीक छ. उनीहरू सुन्दर पातलो प्यान्ट बनाएर उनीहरूलाई थोत्रो सरासर बनाउछन् तर साँच्चिकै बताउन सक्दैनौ. त्यो भन्दा पनि गुणस्तर अचम्मको छ र म यी लगाउन पर्खन सक्दिन!
उनीहरू त्यति राम्रो देखिन्थै! थिन र आरामदायी
प्यान्ट त यति प्यारो थियो !!! तर म एक आकारको 16 र 2XL किनेको छु, र 2XL ले मात्र मेरो मम लगायो जो आकार १२-१४ छ. साच्चै प्यारो प्यान्ट हेर्यो कसरी उनीहरु वेबसाईटमा गर्छन् तर सिजिने बुद्धिले सबैभन्दा ठूलो
आउन केही समय लाग्यो तर त्यो पर्खनै लायक थियो! उनीहरू धेरै राम्री फिट हुन्छन्, साइजमा सही चलाउँछन् र तिनीहरू ठूलो गुण हुन्छन्:)
फोटोमा देखाइएको कुरा प्यान्टले प्रतिबिम्बित
आइपुग्न एक महिना लाग्ला तर यति लायक!
यदि आवश्यक भएमा राम्रो र फैलाउने
यहाँ प्राप्त गर्न यति लामो समय लाग्यो भनेर निराश भयो, तर सञ्चार ठूलो थियो र मैले बुझ्न सक्ने परिस्थितिहरू कोभिड १९ मुद्दा भएकोले पूर्ण छैन. मेरी नातिनी प्यान्ट प्राप्त गर्न लिप्त छ र फोटो खिचाउँदा म सँगै पठाउँछु! यसप्रति तपाईंको ध्यानाकर्षण भएकोमा फेरि पनि धन्यवाद छ र आशा छ सबै तपाईंको व्यापारसँग राम्ररी जानेछ. सावधानी अपनाउनुहोस् ...
म यी प्यान्टलाई यति धेरै माया गर्छु, तैपनि म उनीहरूलाई फर्काउन लागिरहेको छु किनभने उनीहरू फिट नभएको र आकारको माध्यमको क्रम जारी राख्छन्.
सामग्री राम्रो छ र यो पूर्ण देखिन्छ
त्यसैले अनौठो! इन्स्टाग्राम विज्ञापनमा यी प्यान्ट सियो त्यसैले म तिनीहरुलाई आदेश दिन नर्भस थिए तर तिनीहरु यस्तो हट आएको!
यी हुन् प्रेम जी! मैले गलत साइत ल्याएँ र यी पछाडी एउटा सानो आकारको लागि पठाएँ र नयाँ प्यान्ट आयो बेल्ट लिएर आयो म संग प्रेम! !!! गुणस्तर ठूलो छ, त्योहारका लागि पूर्ण सामग्री आदि.
फुल प्यान्ट, थोरै गलत साइनिङ म यी प्यान्ट मन पराउँछु! हरेक पटक म तिनीहरुलाई लगाउँछु म बधाई दिन, दिनभरि. तर, म उनीहरूकै आशा गरिरहेकी थिएँ-म अमेरिका २ हुँ र सानो भए पनि अपेक्षा गरेभन्दा धेरै ठूलो थियो. प्यान्ट पनि बेल्ट लोप्स छैन, जसले गर्दा ठीक नगर्दा धेरै गाह्रो हुन्छ. यदि योग्य थियो भने तिनीहरू मध्य उच्च वृद्धि हुने निश्चित छ तर तिनीहरू ममाथि एकदम कम बस्छन्. गुणस्तर नै ठूलो छ यद्यपि! प्यान्टमा डिजाइन निकै स्पष्ट छ. समग्रमा, म यी कसैलाई एक साइत ४ मा सिफारिस गर्ने गर्छु. यदि एक्सएसले बनाएको भए त्यसलाई प्रेम गर्ने हो.
फ्यान्टास्टिक र एक शो रोक्ने वोर यी एक फेस्टिभलमा एक अंगको साथ र यति धेरै बधाई प्राप्त भयो. प्लस टु मा हल्का सामग्री मा त्यति सहज थियो र तिनीहरु मा नाच्न सजिलो थियो! साथै, हिप्स मा निचोड बस्यो! मैले विशुद्ध रूपमा आकार लिएँ त्यसैले म उत्सवका लागि समय समयमा उनीहरूलाई प्राप्त गर्न सक्थें (मेरो साइज स्टकमा थिएन) र पूर्णरूपमा फिट गर्न थोरै परिमार्जन गर्न सक्षम भएँ. मलाई थाहा छ सही आकारलाई मैले किनेको भए ठूलो फाईदा हुने थियो!
धेरै खुसी छु म धेरै खुसी छु र यी प्यान्टमा निकै प्रभावित छु. सिकिस्त दुरुस्त छ र गुणस्तर धेरै राम्रो छ! खरिद गर्ने सोच कसैका लागि सिफारिस गर्ने
यी हुन् प्रेम जी! यी एक चाडपर्वलाई वोर र यति धेरै बधाई! THANK.U xx
मेरो फेभ प्यान्ट! शाब्दिक मेरो फेभ प्यान्ट सदाका लागि!
५ तारे त्यसैले ट्रेन्डी! म यिनीहरूसँग प्रेममा छु र अरू कतै पनि कतै देखेको छैन
धन्यवाद थेरेसहरु यति अद्वितीय छन्. सबैले मलाई सधै कहाँ बाट कहाँ बाट कहाँ बाट कहाँ बाट मान्छ!!
प्रेममा मैले यो भन्दा पहिले जस्तो अती देखेको थिईन. प्रेममा IM
अचम्मको फेरि अर्को उत्पादन जुन अचम्मको र सही साइनिङ